ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): April 2010
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:48 AM0comments Links to this post
Sometimes you areashower,
cooling the heart and pleasing the head.
Sometimes you are an enigma,
vexing the heart and puzzling the head.
And sometimes you areadagger,
piercing the heart and slashing the head.
Beauty, am I to
smile, ...cry....or .....die?
(From Poems On Sentiments)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:13 AM0comments Links to this post
ဘုန်းကြီးတို့ ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး သိထားရမှာက သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဒ်မှာ သက္ကာယဆိုတာ ထင်ရှားရှိတဲ့ ရုပ်နာမ်အပေါင်းအစုကိုခေါ်တယ်၊ သက္ကာယကို ပယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်၊ သူမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ယူဆနေတဲ့ ဒိဋ္ဌိကိုသာ ပယ်ရမှာ။
သက္ကာယ နဲ့ ဒိဋ္ဌိ
သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘို့ ရာ ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံးဟာ ဘာကိုရှုရမှာလဲမေးရင် သက္ကာယကို မြင်အောင် ရှုရမယ်၊ သက္ကာယကိုမြင်ရင် ဒိဋ္ဌိဆိုတာ ပြုတ်သွားမယ်။
အာနာပါန နဲ့သတိပဋ္ဌာန်
အာနာပါနဿတိကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပွားနေတဲ့သူဟာ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးလုံးကို ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူထားပါတယ်။ အာနာပါနဿတိ တစ်လုံးကို သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ပွားကြည့်ရင်၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးလုံး သူ့ နေရာနဲ့ သူ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ ရတယ်။
၄၆။ မြေတစ်ပြင်လုံး၌ ဧကရာဇ်မင်း ဖြစ်ရသည်ထက်၊ နတ်ပြည် ဗြဟ္မာပြည်သို့ရောက်ရသည်ထက်၊ တစ်လောကလုံးကို အစိုးရသည်ထက် “သောတာပန်” ဖြစ်ရတာက မြတ်တယ်။
၄၇။ အနာမရှိသော လက်ဖြင့် အဆိပ်ကိုကိုင်လျှင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စေတနာမရှိဘဲ ပြုမိလျှင် အကုသိုလ် မဖြစ်ပါဘူး။
၄၈။ မကောင်းမှု ပြုထားလျှင် ကောင်းကင်မှာ နေနေ၊ သမုဒ္ဒရာအလယ်မှာ နေနေ တောင်ခေါင်းထဲနေနေ မကောင်းမှုမှ မလွတ်နိုင်ပါဘူး။
၄၉။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ ၀ိပါတ်တော် ၁၂-ပါး ကြုံရသေးတယ်။ ၀ဋ်ကြွေးပါမည့် အလုပ်အပြောကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၅၀။ သေခြင်းတရား (သေမင်း) က နှိပ်စက်တော့ ဘယ်ဆွေမျိုးမှ မကယ်နိုင်ဘူး။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:57 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:56 AM0comments Links to this post
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:41 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:11 PM0comments Links to this post
“တာသင်္ကြန် နဲ့ သံဝေဂဘွဲ့ ”
တာသင်္ကြန် သက္ကရာဇ်ပြောင်းပြီမို့ ၊
ဇရာသန် တစ်နှစ်ဖြင့် နှောင်းပြန်ပေါ့၊
အသစ်တွေ ဟောင်းပါလို့အိုခဲ့ပြီ။
သြော်... ရုပ်ကလာပ် ကယ်တို့ ၊
တစ်ရွေ့ ရွေ့ ဝင်ကာ၊ နေ့ စဉ်နေ့ စဉ် လှမ်းခဲ့တယ်၊
ကွယ် ...နွမ်းလို့ကြုံလှီ။
အနိစ္စပေမို့စိတ်ချတော့ မသွေသာသည်၊
သေမှာ အတည်ကွဲ့သတ္တ၀ါအများ။
သြော် .... တစ်နှစ် တစ်နှစ်ကယ်နှင့် အသစ်အသစ် ခန္ဓာကိုယ်တို့ ၊
မြန်စွာ အိုအောင် တမြည့်မြည့်နဲ့ဆွေးခဲ့သော်လည်း၊
ဉာဏ်လွှာတိုသူတွေ တစေ့စေ့မှ မတွေးနိုင်ဘူး၊
တရွေ့ ရွေ့ ပြေးကာ အိုနယ်ဝင်ခဲ့ပေါ့၊
ပျိုတယ်ထင်သူတွေ ကြော့ကြော့ ကြော့ကြော့နဲ့ မြူးရှာကြ၊
နှစ်ကူးပြီး သင်္ကြန်ခါချိန်မို့ ၊
ခန္ဓာအိမ် အသစ်တစ်ခုဖြင့် ပြောင်းပြန်ပေါ့၊
အမယ်မင်း.... အဟောင်းဖြစ်ပြီး အသစ်ဆက်လို့ပွားပေမယ့်၊
၄င်းအသစ်လဲ တစ်ခေတ်ပျက်လို့သွားပေလိမ့်၊
အို.... ကွယ်တို့ ရဲ့အကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊
သင်္ကြန်တွင်း ဘလော့ဂ်မှာ ဘာရေးရမလဲစဉ်းစားနေတုန်း ဆရာပါရဂူရဲ့“ဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု” စာအုပ် ထဲမှာ ဒီသံဝေဂကဗျာလေး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖတ်မိတာနဲ့သင်္ကြန်အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။
Labels: Dhamma Poems
ဒိဋ္ဌိ (၆၂)ပါး၏ ရေသောက်မြစ်
သက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော နှောင်ကြိုးနဲ့အတုပ်အနှောင်ခံရတဲ့သူဟာ ဘ၀နဲ့ ကာမကို တပ်မက်တဲ့ တဏှာတည်းဟူသော ရေအလျဉ်မှာ မြုပ်တစ်လှည့်၊ မျောတစ်လှည့်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်၊ မျောတာကနည်းတယ်၊ မြုပ်တာကများတယ်။ ဒီတော့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာ ဒိဋ္ဌိ(၆၂)ပါးလုံးရဲ့ရေသောက်မြစ်ကြီးဖြစ်တယ်။ သူ့ ကို အမှီပြုပြီးတော့ ဒိဋ္ဌိအားလုံး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိ နဲ့သံသရာ
သက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော ကြိုးတစ်ချောင်း အတုပ်အနှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကျန်တဲ့ (၆၂)ပါးသော ဒိဋ္ဌိကြိုးတွေ ၀ိုင်းပြီးတော့ တုပ်ထားတာ ဖြစ်လေသောကြောင့် သံသရာတည်းဟူသော ထောင်အိမ်၊ နှောင်အိမ်၊ လှောင်အိမ်ကြီးထဲမှာ မလှုပ်နိုင်အောင် မြုပ်ရတော့တာပဲ။
တကယ်တန်းအရှိက ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ သူ ငါမဟုတ်၊ ရုပ်နာမ်တို့ ရဲ့ အစုအပေါင်း၊ မရှိတာက သတ္တ၀ါ၊ ဒီတော့ တကယ်မရှိတဲ့သတ္တ၀ါကို ရှုမှတ်ဖို့ မလိုဘူး။ တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ ရုပ်နာမ်တို့ ရဲ့အစုအပေါင်းကို မြင်အောင်ရှုရမယ်။ အဲဒါမှ သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်လွတ်မယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:49 AM0comments Links to this post
A Plea To Head And Heart (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)
show me not the way to amass wealth
for it may drown me inasea of greed.
Nor the way to harness power
for it can sow the destruction seed.
And not the way leading to fame
for it can inflate and deflate me again.
But show me how the wise
think right, speak right and do right.
The path they never lose from their sight
and win over passion with reason.
give me the guts to face life
and the strength to endure hardship.
So that I be placid inastorm
as the brave strive to survive.
And if I reach the shores of happiness
withachance to hoist the flag of success,
let me be humble not arrogant
and know that everything is transient.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:26 AM0comments Links to this post
၄၂။ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ ဟီရိ၊ သြတ္တပ္ပ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ အရိယာဥစ္စာ ခုနှစ်ပါးဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ အမွေတော်ပဲ။
၄၃။ ဆိုးသွမ်းမိုက်ရိုင်းတဲ့ သားသမီးတွေကို မိဘများက ပြောဆိုဆုံးမလို့ မရတော့ အမွေပြတ် ကြေငြာတယ်။ မြတ်စွာဘုရားကလည်း ပျင်းနေတဲ့ လူတွေကို အမွေပြတ် ကြေငြာထားပါတယ်။ လူပျင်းတွေဟာ အရိယာ ဥစ္စာ ခုနှစ်ဖြာဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓအမွေတော်တွေကို မရနိုင်ပါဘူး။
၄၄။ အရိယာဥစ္စာ ခုနှစ်ဖြာ ပြည့်စုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တကယ့်လူချမ်းသာအစစ်ပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့် ဘ၀တိုင်အောင် ဘ၀ဆက်တိုင်း ဘ၀ဆက်တိုင်း ချမ်းသာစေနိုင်ပါတယ်။
၄၅။ မိဘက သားသမီးကို ပစ္စည်းတွေ ပုံပေး၍ လောကီချမ်းသာ ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ လောကုတ္တရာချမ်းသာ ပြည့်စုံအောင် လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:03 AM0comments Links to this post
For millions in the world
are suffering no less.
you have tasted life
which sometimes is bitter
and other times sweet.
burying yourself in pain.
Your trouble will only double.
mountains, however lofty,
come under the sole and heel.
Waves, however gigantic,
come under the hull and keel.
All are surmountable.
and muster courage.
Withasound mind and firm steps
come on, move ahead!
Don't give up, my dear.
Your heart is the driving spirit.
Your head the guiding compass.
Go on! Make it!
you are no more the man before.
Future awaits you withasmile.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:30 AM0comments Links to this post
(U SannAung ၏ Youtube စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူ ဓမ္မဒါနပြုပါသည် ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:13 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Video, Mahasatipatthana Sutta, Sayardaw Ashin Osidha
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:58 AM0comments Links to this post
Surmountable (Harmony Of Head And Heart By Moe He...